SOMALIA: Ciidamada Puntland iyo Shabaab oo ku dagaalamay buuraha Golis - Wargane News
Home Somali News SOMALIA: Ciidamada Puntland iyo Shabaab oo ku dagaalamay buuraha Golis
SOMALIA: Ciidamada Puntland iyo Shabaab oo ku dagaalamay buuraha Golis
Wararka kasoo baxaya magaalada Galgala ee gobalka Bari ayaa sheegaya in Isniintii galinkii danbe inuu dagaal ku dhexmaray buuraleyda Golis cutubyo kamid ah ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka Al Shabaab.
Dagaalkan ayaa la sheegay inuu socday muddo saacad kudhaw walow aan weli faah faahin laga bixin khasaaraha ka dhashay.
Warar horudhac ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac labada garab soo kala gaaray.
Ciidamada Dowlada Puntland ayaa dhamaadkii sanadkii tagay kooxda Al Shabaab ka saaray xaruntoodii ugu weyneyd oo ay ku lahaayeen deegaanka Galgala oo ku taal dhul buuraley ah.
Waxaa weli kasocda qeybo kamid ah buuraleyda Golis hawlgalada ay ciidamada Puntland sheegeen inay ku baadi goobayaan maleeshiyaadkii Al Shabaab ee horey uga baxay Galgala iyo waliba hogaankooda oo la sheegay inuu ku dhuumaaleysanayo deegaankaasi.
Somalia: Madaxweynaha Soomaaliya oo dalka dib ugu soo noqday